Mpanamboatra sy mpamatsy lamba vita amin'ny kofehin-tsolika China Beihai Fiberglass
1.Izany dia tsy vitan'ny hoe manaparitaka ny akora simika biolojika fotsiny, fa afaka manivana ny lavenona amin'ny rivotra, manana ny toetran'ny refy azo antoka, ny fanoherana ny rivotra ambany ary ny fahaizany mandray be loatra.
2.Ny faritra voafaritra manokana, ny tanjaka avo, ny mason-koditra kely, ny herin'ny herinaratra, ny fanoherana ny rivotra kely, tsy mora ny manapotipotika sy mandry ary maharitra ny androm-piainana.
Ny Carbon Fiber Fabric, anarana iray hafa dia lamba karbaona navitrika, mandray ny macromolecule fitaovana hanamboarana ny vovoka karbaona mihetsika tsara mifangaro organika amin'ny lamba tsy tenona, tsy afaka mandoto fotsiny ilay simika simika biolojika, fa afaka manala ny lavenona amin'ny rivotra, manana ny mampiavaka ny refy azo antoka, ny fanoherana ny rivotra ambany ary ny fahaizany mandray be loatra.
● Faritra ambony manokana
● liang kely
● Fahaizana herinaratra lehibe
● Fanoherana rivotra kely
● Tsy mora manoto sy mandry
● Androm-panompoana maharitra
Ny lamba fibre karbaona no mampihetsika dia manana ny mampiavaka ny faritra amboniny manokana, ny pore kely, ny capacitance lehibe, ny fanoherana ny rivotra kely, ny tanjaka avo, tsy mora ny manapotipotika sy ny mandry, ny androm-piainana lava, sns... misy valiny tsara.
Ampiasaina matetika amin'ny respirator fiarovana, hopitaly, indostria, kitapo, fiarovana ny tontolo iainana ary haingon-trano voaravaka anaty trano, ny fanamasinana rano sy menaka koa.
Teo aloha: Fiber-Felt carbon carbon activated
Manaraka: 3D Inside Core
Lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny fibre karbaona